Ungavuna Kanjani Garlic - Imifino
Ungavuna Kanjani Garlic
Uzovuna Nini Garlic
Ungayigcina Kanjani Imayli
Imibuzo Evame Ukubuzwa Garlic
Nginothando lwegalikhi. Ngiyathanda ukuthi ngingajabulela izithelo zomsebenzi wakho cishe unyaka wonke.
Kuyi-veggie enhle ukukhula, kepha kunamaqhinga ambalwa okufanele wazi uma kukhulunywa ngokutshala nokuvuna ugarlic.
Uma ungazi ukuthi uzoyivuna nini igalikhi, uzongena kwesinye sezimo ezimbili:
Bamba ugarlikhi wakho kusenesikhathi futhi uzoba nama-bulb amancane.
Gcina ugalikhi wakho emhlabathini isikhathi eside kakhulu, futhi uzoba nesigaxa esihlukanisiwe, esivuthwe ngokweqile esingesihle.
Ngasikhathi sinye, kubalulekile ukwazi ukuthi uvuna kanjani ugarlic. Ngenhlanhla lokhu akunzima kakhulu.
Ngakho-ke, ake 'simbe' futhi ngizozama ukukucacisa ngangokunokwenzeka!
Ngakho-ke kufanele uvune nini igalikhi yakho?
Lokhu akuyona isayensi ngqo, futhi kuncike kakhulu ohlotsheni lokukhula kwakho nesimo sezulu okuso. Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi kunezivuno ezintathu zikagalikhi phakathi nonyaka.
Isivuno sokuqala imvamisa isentwasahlobo, kanti izitshalo zivame ukuba ngamamitha ubude ngalesi sikhathi. Ungadonsa isitshalo esiphelele bese usebenzisa le scallion ukupheka noma ugarlic omusha, noma ungavele usike amanye amaqabunga bese uwasebenzisa njengokwengeza okuhle ekhishini lakho.
Isivuno sesibili imvamisa kwenzeka ngoJuni futhi lokhu kungaleso sikhathi lapho ungavuna khona ama-scapes. Ama-scapes akhula esiqwini sokhuni esiphakathi nezinye izinhlobo zegalikhi ezinazo. Ngokuvamile kukholakala ukuthi ukususa ama-scapes kusiza ekwakheni ama-bulbs kamuva, kepha umbono ngale ndaba uhlukaniswe kancane phakathi kochwepheshe.
Ngokwami ​​ngithanda ukususa ama-scapes, ngoba amnandi kakhulu futhi anempilo, futhi kubonakala sengathi kuyasiza ngokuba nama-bulb amakhulu. Uma uthatha isinqumo sokuvuna ama-scapes, angagcinwa izinyanga ezi-3 uma efrijini.
izithombe zezinwele zezinwele zonkulunkulukazi
Esesithathu - futhi main - isivuno eza ngokuvamile kamuva ehlobo, cishe maphakathi noJulayi kuze kube sekupheleni kuka-Agasti. Futhi, yonke le migqa yesikhathi ingaqhutshelwa phambili kwesikhathi uma isimo sezulu sifudumele, noma ngabe kunesimo sezulu esifudumele ngokungajwayelekile, ngakho-ke kungcono ukuhlola izitshalo zakho njalo.
Kunokulungiselela okuncane okuza kuqala lapha, futhi ngizobuya ukuzocubungula imininingwane, kepha ngithanda ukuveza into yokugcina engaba nomthelela esikhathini sokuvuna:
Uhlobo lwegalikhi olutshalile.
Ngokuvamile, kunezinhlobonhlobo ze-softneck ne-hardneck, ngayinye enezinzuzo zayo (kunezinhlobo ezinamakhanda amakhulu, kodwa lezi zifana namalikhi, futhi azinconywa ngempela ukutshala).
Ibhasi likagalikhi othambile.
Yilokhu ovame ukukuthola esitolo sakho sendawo. Lezi zinhlobo zinconyelwa isimo sezulu esifudumele, futhi zingalukwa njengoba izintamo zazo zihlala zithambile ngemuva kokuvuna. Imvamisa zinezingqimba ezimbili zama-clove amancane nohlaka olulodwa lwama-clove amakhulu azizungezile, futhi zinokunambitheka okuqinile.
Izinhlobo ezivame kakhulu ze-softneck yi-Silverskin ne-Garlic Artichoke. ISilverskin inokunambitheka okuqinile futhi ingagcinwa isikhathi esingangonyaka, kuyilapho i-Artichoke ingagcinwa izinyanga ezingaba ngu-8 futhi iphake kancane isibhakela.
Isivuno sikagalikhi oqinile.
Lezi zilungele lobu busika obubandayo basenyakatho, futhi izimpande zazo ezijulile zivumela lesi sitshalo ukuba siphile emakhazeni nasekuncibilikeni komhlaba kangcono kakhulu. Ngokungafani ne-softnecks, banesendlalelo esisodwa kuphela sama-clove amakhulu akhula endandeni ezungeze isiqu.
Ngenkathi kungahle kube lula ukukhula, ngeshwa impilo yabo yeshalofu imfishane. Kepha hheyi, kuncane ukuxebuka okubandakanyekile futhi bane-scape. Babizwa ngokuthi yi-hardneck ngoba banesiqu esiqinile esisuka ngamasentimitha noma amabili ukusuka phezulu kwesibani. Izinhlobo ezidume kakhulu yiRocambole, Purple Stripe, nePorcelain.
Njengoba i-softneck ijwayele ukutshalwa ezindaweni ezifudumele, ungalindela isivuno sabo esikhulu ekuqaleni kwentwasahlobo. Ngokusobala, abanaso isivuno sesibili, ngoba kuyaqabukela babe nama-scape.
Ukuvuna ugarlic kuyinkohliso encane, ngoba awukwazi ukubona ukuthi ama-bulbs akulungele nini ukumba. Uma ulinda kuze kube yilapho wonke amaqabunga eba nsundu uzoba nama-bulbs avuthiwe, futhi ama-clove azoqala ukuhlukaniswa, okusho ukuthi igalikhi yakho yonakala kalula.
Njengoba iqabunga ngalinye lisebenza njengesihlanganisi sesibani, kusho ukuthi ngokujwayelekile ungathanda ukuba namaqabunga amaningi aphilayo lapho umba ugalikhi wakho, njengoba lezi zisongelo zingakhulisa kakhulu impilo yeshalofu.
Ngakolunye uhlangothi, uma umagange kakhulu futhi uzimba masinyane, uzogcina unama-bulb amancane nawo angakwazi ukuhlala isikhathi eside lapho egcinwe.
Abanye ochwepheshe bathi kufanele uvune lapho amaqabunga aphansi ansundu, kepha ama-5-6 aphezulu aseluhlaza. Umthetho omuhle wesithupha ukulinda kuze kube amaqabunga wesithathu ansundu. Kungumqondo omuhle ukubheka isitshalo esisodwa noma ezimbili, ukubona ukuthi ama-bulb akhulu ngokwanele yini. Vele ususe ukungcola okuncane okuzungeze isiqu ukuze ubukeke kahle.
Uma wanelisekile ngosayizi, kufanele uqhubeke nokuvuna. Uma kungenjalo, lapho-ke ungalinda kancane, kepha lapho cishe isigamu samaqabunga esinsundu, kufanele umbe wonke ugarlic wakho, noma ngabe usayizi ungakanani.
Isivuno esinciphisa umona.
Ukuvuna ugarlic kuqondile ngqo, kepha ukunakekelwa kufanele kuthathwe. Noma kungaba okulingayo ukuzama ukukhipha ama-bulb ngeziqu, cishe uzophela ngesiqu esiphukile, njengoba sizwela kahle. Lokhu kuyinkinga ngoba ufuna ukwelapha ugalikhi onamaqabunga, ngoba ugcina kangcono ngaleyo ndlela.
Indlela enhle ukusebenzisa imfoloko yokufaka isikhala ukuze ukhulule inhlabathi ezungeze izitshalo zakho, kepha qaphela ukuthi ungamba kakhulu emakhanda. Uma uqiniseka ukuthi ungawumba, phakamisa ngokucophelela ama-bulbs ngefosholo noma ngethuluzi elifanayo, bese ugoqa umhlabathi ngobumnene. Uma inhlabathi inekhwalithi encane efana nobumba nezinti, ungazami ukuyihlanza ngesandla, vele uyishiye okwamanje.
Manje, ngokungafani no-anyanisi, akuwona neze umqondo omuhle ukushiya ugalikhi wakho omusha isikhathi eside elangeni, ngakho-ke ungawushiyi ulele lapho udlulela esitshalweni esilandelayo. Yise endaweni enesithunzi enokujikeleza okuhle komoya, njengeveranda noma ishede (noma okungenani ulibeke ngaphansi kwesihlahla okwamanje).
iyini i-shampoo enhle kakhulu eluhlaza okwesibhakabhaka
Nakulokhu futhi, igalikhi ibucayi ngempela, ngakho-ke gwema ukuyishayisa noma ukuyilahla. Balimaza kalula futhi kunciphisa kakhulu ukunambitheka.
I-Garlic ingahlala isikhathi eside, kepha kufanele yelashwe futhi igcinwe kahle.
Ngokuvamile, ukwelashwa kusho ukuthi uvumela ugalikhi wakho ukuba wome kancane ngendlela yokuthi ugcine zonke izakhamzimba nokunambitheka. Njengoba sengishilo, kufanele ugcine ugalikhi wakho endaweni eyomile nenomthunzi ngokusakazwa komoya okuhle.
Indlela engcono kakhulu, ngombono wami, ukuyilengisa sibheke phansi ezihlangwini ze-4 kuye ku-6, kepha abanye abalimi babuye bazihlanganise ngamaqoqo ama-bulb ayi-10 kuye kwayi-12. Amabhanda amancane asho ukuthi ugalikhi uqala ukuphefumula kakhulu, ngakho-ke ukwelashwa kushesha kakhulu.
Uyakhumbula lapho ngithi qaphela ukuthi ungazisiki iziqu ngenkathi uvuna?
Udinga ukwelapha ugalikhi onamaqabunga nezimpande, njengoba isibani sigcina ukudonsa amandla kuzo ngokuhamba kwesikhathi. Amaqabunga aqinile futhi asho ukuthi noma iziphi izimbungulu nesikhunta ngeke zonakalise ugalikhi wakho ngenkathi uselaphekile.
Ukwelapha kuvame ukuthatha phakathi kwamasonto amabili nezinyanga ezimbili, kuya ngomswakama. Uzokwazi ukuthi igalikhi yakho isilungele ukugcinwa ngoba amaqabunga azokoma ngokuphelele futhi abe nsundu, futhi izimpande zizobukeka zishwabene futhi ziqine njengebhulashi. Futhi, i-bulb wrappers izoba yomile futhi ibe nephepha, futhi uzokwazi ukuhlukanisa ama-clove kalula.
Vele, akudingeki uphulukise wonke ugalikhi wakho. Ungasebenzisa ingxenye yayo entsha, ngaphandle kwensimu. Ungasebenzisa okunye kokuvunwa kwakho ukwenza yenza isifutho sakho sikagalikhi . Uma uhlela ukutshala futhi, kufanele ugcine amanye ama-bulb wakho amakhulu, amahle kakhulu, aphulukisiwe.
Kusho ukuthini uma umfana engakwazi ukuqeda
Ngaphambi kokugcina ugarlic wakho, udinga ukusika izimpande bese ushiya u-1/4 noma 1/2 intshi. Njengoba konke seyomile, ukungcola okuningi okusele kuzosuswa, futhi izingqimba ezimbalwa zezisongelo nazo zizohlukana. Qaphela ukuthi ungasusi izendlalelo eziningi kakhulu ezisongekayo, ngoba zivikela ama-clove. Kungcono ukuthi ungazihluphi kakhulu ngakho, vele ususe imisuka engcolile kakhulu. Ungagezi ama-bulb.
Ukugcina ugarlic kulula. Zigcine endaweni epholile, eyomile. Igalikhi egcinelwe ukuthengisa igcinwa kuma-32 ° F, kepha ibanga lokushisa elifanele lokugcina ikhaya liphakathi kuka-40-60 ° F, ngokusho kwe ochwepheshe bamazambane nogalikhi . Ngamanye amagama, ungamane uziphonse ekhabetheni lakho lasekhishini, noma eshalofini lesitoreji.
Njengoba igalikhi ivame ukuhluma emazingeni okushisa aphansi, akukhuthazwa ukuyigcina esiqandisini. Umswakama ofanelekile uzungeze ama-60%, ngakho-ke ungawugcini endaweni yakho engaphansi komhlaba noma egumbini elingaphansi uma kumanzi, ngoba kungaholela ekubunjweni nasefungus.
U. Iyiphi indlela engcono yokugcina u-garlic wami?
I-Garlic ihamba kalula uma kuziwa ekugcineni. Ngempela, noma yisiphi isitsha esinokuhamba komoya okuhle sizokwenza. Ungayifaka emasakeni anezikhala, njengaleyo esetshenziselwa ukugcina amazambane, noma ungayifaka kumabhasikidi alukiwe, emasakeni amaphepha ansundu, emabhokisini amakhadibhodi, njalonjalo.
Uma ngabe ubukhula ugarliki othambile, ungazisusa iziqongo, noma ungazigcina bese uluka ugalikhi wakho bese uwulenga ekhishini (noma lapho ucabanga ukuthi kufanele khona).
U. Wenziwa kanjani uboya begalikhi?
Lokhu kudinga ukuthi ushiye impela isiqu lapho uselapha. Ngemuva kokuthi igalikhi yakho isilungele ukugcinwa, udinga ukucwilisa iziqu ukubenza bathambeke. Uqala ngama-bulb amathathu amakhulu akha phansi u-braid wakho. Uma uzibeka, uqala ukufaka ama-bulb asele (uvamise ukuba nama-12-13 bulbs ku-braid), bese uwafaka njengoba ubungaluka izinwele.
U. Yini i- “scape”?
Ama-scapes atholakala ezinhlotsheni ze-hardneck garlic. I-scape isandiso esiluhlaza esincanyana esikhula esiqwini sokhuni esimaphakathi, esiqala ukuzungeza isiqu njengoba sikhula. Ngasekupheleni kwe-scape kunokuvuvukala okuncane okuqukethe ama-clove amancane angaphezu kwekhulu, afana nezofuzo afana nama-clove atholakala ku-bulb.
Ngemuva kwesikhashana la makhasethi ayaphela, bese kuthi ama-clove amancane achitheke phansi. Kodwa-ke, la ma-scape athatha amandla amaningi isitshalo esingawasebenzisa ukukhulisa isibani, ngakho-ke avamise ukusikwa. Ama-scapes amnandi kakhulu futhi anempilo, futhi ungenza imifino emikhulu yokuthosa nawo.
Ngenkathi iningi labantu livumelana nezinzuzo zokususa ama-scapes, abanye ochwepheshe bathi ukushiya ama-scape kunikeza ama-clove angcono wokutshala kabusha. Vele, akukho kulokhu okufakazelwe nganoma iyiphi indlela, ngakho-ke konke kufana nokuthandwa nguwe.
U. Ngazi kanjani ukuthi ama-garlic bulbs akulungele ukumba?
kuphi ukuthenga izikibha
Bheka amaqabunga. I-Garlic ivame ukulungela ukuvunwa lapho amaqabunga aphansi esefile, futhi cishe isigamu sedazini siseseluhlaza. Ngaphambi kokumba yonke igalikhi yakho, ungabheka isitshalo sakho esisodwa noma ezimbili, ukubona ukuthi isibani sikhulu ngokwanele yini nokuthi ukugoqwa kwakheke kahle.
U. Ngingazishiya iziqongqo zivuliwe, noma ngizinqume?
Uma ukhula ugarliki we-softneck, kumane kuyindaba oyithandayo nokuthi ufuna ukuyigcina emasakeni, noma wenze amagoda ngayo. Ngegalikhi ye-hardneck, kuwumkhuba ojwayelekile ukusika iziqongo.
U. Kufanele ngiyiyeke isikhathi esingakanani igalikhi yomile?
Kuya ngomswakama, kepha phakathi kwamasonto amabili nezinyanga ezimbili. Indlela enhle yokutshela ukuthi yenziwe ukuthi amaqabunga, izimpande, kanye nama-wrappers ayoma.
Njengoba ukwazi ukubona, ukukhulisa ugarlikhi kungumsebenzi omncane, uma ubheka kuzo zonke izinyathelo okudingeka zithathwe, kodwa kuzwakala kubi kakhulu kunalokho okuyikho. Ngempela, cishe wonke umsebenzi udinga isikhathi nomzamo omncane kakhulu, bese kuthi lapho uthola umkhiqizo omnandi, onempilo, ongawujabulela unyaka wonke.
Ngakho-ke ulindeni? Thola i-crackin ’bese utshala ugalikhi!
Yabelana ngale ndatshana uma uyitholile ilusizo, noma uma umane nje wayijabulela.
Ngabe unolwazi noma amathiphu ongathanda ukuwabelana nathi? Ngibheke phambili ekuyizweni kumazwana!
yenza eyakho i-eyelash extensions
amabhodlela amahle kakhulu okusika amabhikini
ungazithola kanjani izinwele ezi-wavy unomphela
izingubo ezivamile zasolwandle zezivakashi zomshado